"MẸO HAY" Cách Chọn Size Quần Áo Nữ + Bảng kích thước váy | Kotexpro - Kotexpro
“MẸO HAY” Cách Chọn Size Quần Áo Nữ + Bảng kích thước váy | Kotexpro
Kule mihla ukuthenga kwi-intanethi kukhethwa ngabasetyhini ngenxa yesantya kunye nokulula. Nangona kunjalo, abafazi abaninzi baye bahlangabezana neemeko zokulila ngenxa yokuba bengafanelanga ngokufanelekileyo, njengokuthenga iimpahla zaselwandle, izixhobo zokuhamba, kodwa ukukhetha ubungakanani obungalunganga buchitha ixesha kwaye abanazo iimpahla ezintle zokuhamba. Ke, ukuphepha iimeko ezingalindelekanga, nceda ujonge itafile yenqaku indlela yokukhetha ubungakanani beengubo zabasetyhini ngezantsi, ukuze ukwazi ukufumana amava ngakumbi kunye nolwazi ekukhetheni ubungakanani ngokwakho.
1 1. Ingaba itshathi yesayizi yempahla yabasetyhini iguqulwa njani?
2 2. Itshathi yobungakanani yamantombazana
2.1 Itshathi yobungakanani kunye nendlela yokukhetha ibra yabasetyhini eqhelekileyo
2.2 Indlela yokukhetha ihempe kunye netshathi yobungakanani behempe kubasetyhini
2.3 Indlela yokukhetha umzimba oqhelekileyo wabasetyhini kunye nehempe ye-heattech
2.4 Itshathi yobungakanani beT-shirt eqhelekileyo yabasetyhini
2.5 Itshathi yobungakanani bedyasi yabasetyhini kumantombazana
3 3. Itshathi yobungakanani kunye nendlela yokukhetha ibhulukhwe yabasetyhini
3.1 Okokuqala, i jeans
3.2 Ukukhethwa kweebhulukhwe zekhaki kumantombazana
3.3 Itshathi yesayizi echanekileyo yempahla yangaphantsi yabasetyhini
4 4. Itshathi yesayizi yokugqoka kunye nendlela yokukhetha ilokhwe efanelekileyo ukuze ilingane
4.1 Itshathi yobungakanani bokunxiba kumantombazana
4.2 Itshathi yobungakanani besambatho esiqinileyo sabasetyhini kunye nendlela yokukhetha ukulungelelanisa okufanelekileyo
5 5. Iiparamitha zokuguqulwa komgangatho wabasetyhini kufuneka zikhunjulwe
1. Ingaba itshathi yesayizi yempahla yabasetyhini iguqulwa njani?
Ngenye imini, usefa kwi-intanethi ukuze ubone izinto ozithandayo zithengiswa kwi-intanethi, kodwa awazi ukuba yiyiphi isayizi onokuyikhetha, ukuba ukhetha engalunganga, awukwazi ukuyinxiba, kodwa ungayithengi, emva koko. uyazisola. Kulapho kufuneka wazi iiparamitha, ulungelelwaniso lobungakanani beempahla emzimbeni, imilinganiselo echanekileyo yeebhasi zakho ezintathu.
Apha ngezantsi kukho itafile yeesayizi zeempahla zabasetyhini ezisetyenziswa ziifektri zaseVietnam naseAsia:
Kuxhomekeka kwindawo abaza kuyenza inombolo ngonobumba okanye ngobukhulu S, M, L, ..
+ Yintoni ubungakanani beXS? ISize XS imele i-Extra Small, eyisayizi encinci kakhulu kubantu ababhityileyo.
+ Ubungakanani beXL yabasetyhini ngokwetshathi yobungakanani beTQXK iya kulingana nobungakanani be-18 kunye ne-20 yaseYurophu.
+ Yintoni ubungakanani F? Ubungakanani f umele “Freesize”, iihempe ezikhululekileyo zihlala zingenabungakanani ukuze zichwetheze u-F.
Ukuba uyamthanda u-HM, Zara… uphawu oludumileyo lwempahla yaseYurophu, kufuneka ujonge ngokusondeleyo kwitshathi yokuguqulwa kwempahla yabasetyhini.
Siyabona ukuba ukukhetha ubungakanani behempe kunye nokukhetha ubungakanani bebhulukhwe yabasetyhini iya kusekelwa ubukhulu becala kubude, ubunzima okanye imilinganiselo emijikelezo emithathu ukuze amantombazana akhethe eyona mveliso ifanelekileyo nefanelekileyo. .
2. Itshathi yobungakanani yamantombazana
Itshathi yobungakanani kunye nendlela yokukhetha ibra yabasetyhini eqhelekileyo
Indlela yokukhetha ubungakanani bebra ibaluleke kakhulu kubasetyhini, kuba ukuba ukhetha indlela engafanelekanga, kulula kakhulu ukwenza imeko yokwenza umlinganiselo ongalunganga. Ubungakanani beBra buya kwahlulwa ngokolandelelwano: ubukhulu 30, ubukhulu 32 … ukuya kubukhulu 46 bobona bukhulu. Ngaba ukhe wazibuza ukuba zingaphi imilinganiselo yakho yabasetyhini okanye unobungakanani obuqhelekileyo.
Ukuba kunjalo, lungiselela iteyiphu yokulinganisa ngeesentimitha ukulinganisa i-bust yakho ngolu hlobo lulandelayo:
Inyathelo 1: Linganisa isifuba sakho (esinqeni)
Ukusebenzisa irula ebekwe kwisiseko sesifuba, lungisa irula ukuze umlawuli agubungele umzimba kunye nomva. Bamba irula ngqo kodwa ingaqini kakhulu okanye ikhululeke kakhulu, emva koko ujonge kwaye urekhode imilinganiselo ephepheni.
Inyathelo lesi-2: Linganisa indawo engaphezulu yesifuba
Eli nyathelo kukulinganisa inxalenye epheleleyo ye-bust yakho xa simi ngokuthe tye, ubambe irula ngezandla zombini, ubeke irula kwindawo ephezulu yesifuba sakho kwaye uthathe imilinganiselo, uqaphele ukuba ungakhululekanga okanye uqine kakhulu. Gcina irula ngqo ukuze umzimba ukhululeke. Kwaye ke kufuneka unxibe i-underwire bra engamunciyo.
Inyathelo lesi-3: Thelekisa iisayizi zebra ngokwesayizi yetshathi ngokuthi:
Ubungakanani bekomityi (X) = Inyathelo lesi-2 lokulinganisa -Inyathelo loku-1 lokulinganisa (umahluko phakathi komphezulu we-bust kunye nezantsi kwe-bust). Eli nani (X) liya kuhambelana nekomityi yesayizi yebra yakho.
Indlela yokulinganisa ubungakanani bebra buyinto ethandwayo, eyaziwayo kwaye kulula kakhulu ukuyenza ekhaya.
Kungenjalo, ukuba unengxaki yokubala ubungakanani behempe yakho ngokwetheyibhile engentla, ungasebenzisa uguqulo kwitshathi yesayizi yempahla yabasetyhini engezantsi:
I-Bust 85 – ubungakanani ukusuka kwi-83-87cm, ihempe oyinxibayo iya kuba nobungakanani be-38, ubukhulu behempe bulingana nekomityi D, kukho umahluko phakathi komphezulu we-bust kunye nezantsi kwe-bust, eguquguqukayo phakathi kwe-18. -20cm.
+ Guqula i-intshi-cm ubukhulu:
32 intshi ubukhulu – ilingana 70cm
Ubungakanani be-34 intshi – ilingana ne-75cm
Ubungakanani be-36 intshi – ilingana ne-80cm
Ubungakanani be-38 intshi – ilingana ne-85cm
Ubungakanani beesentimitha ezingama-40 – bulingana ne-90cm
Ubungakanani be-intshi ezingama-42 – bulingana no-95cm
Itshathi yobungakanani beengubo zaseVietnam zibalwa kakhulu ngeesentimitha, kodwa ngetheyibhile yobungakanani obungentla, ungayisebenzisa ngokupheleleyo ukulinganisa ubungakanani bebra yabasetyhini ngee-intshi zase-US, EU, ….
Indlela yokukhetha ihempe kunye netshathi yobungakanani behempe kubasetyhini
Iishirts zibaluleke kakhulu kwaye iimpahla eziyimfuneko kubasetyhini. Le mpahla ilula kakhulu ukuyidibanisa, ungayinxiba ukuphuma, ukuya emsebenzini okanye ukuya kwiintlanganiso ezibalulekileyo kunye neesemina. Ngoyilo olwahlukeneyo, izitayile kunye nemibala, ihempe inceda abafazi ukuba benze ubuntu babo kunye nesimbo, ngelixa bekhupha ubuhle obuhendayo. Iihempe zabasetyhini zihlala zikhetha ubungakanani beehempe ngokobude bazo ukunika ubungakanani obufanelekileyo.
Kwiihempe ezincinci, kufuneka ubeke ingqalelo kwimilinganiselo yomzimba, i-bust, isinqe, i-butt. Uyilo lwehempe kufuneka lube tyaba, lucolise igophe lomzimba, lufane, lungaqini kakhulu, luya kudala ukuziva ungakhululekanga, ngamanye amaxesha lubenze abafazi babe neentloni ngenxa yokuba ngelishwa “babonisa”.
Indlela yokukhetha umzimba oqhelekileyo wabasetyhini kunye nehempe ye-heattech
Impahla yomzimba, iHeattech zihlala zezo zineziyilo zokuwola umzimba, ezolulekileyo kunye nezixhobo ezifanelekileyo ezilastiki. Ke ngoko, xa ukhetha ihempe yomzimba kunye neheattech ngokwesayizi yetshathi yempahla yabasetyhini, akufuneki sikhathalele kakhulu malunga nobude kunye nobunzima, kodwa ngakumbi kuya kufuneka sinikele ingqalelo kwi-bust, hem, esinqeni, esinqeni kunye nebhulukhwe yomzimba. ubude.
Itshathi yobungakanani beT-shirt eqhelekileyo yabasetyhini
Kuya kubakho iindlela ezi-2 zokukhetha ubukhulu be-t-shirt yabasetyhini, enye imilinganiselo yomzimba, enye ibunzima kunye nobude. Itshathi yobungakanani engezantsi endiyibonelelayo iya kwenza kube lula kuwe ukuba ukhethe eyona t-shirt ifanelekileyo. Nangona kunjalo, ungabhekisa kwitshathi yobungakanani bebhrendi nganye oyithengayo, kuba umenzi ngamnye ngamanye amaxesha akayi kusekelwa kwitshathi yobungakanani ngokubanzi, kwaye iyantlukwano kwizimbo kunye nemathiriyeli inokudala iyantlukwano.
Nangona kunjalo, abasetyhini abambalwa abazange benze iimpahla ngaphambili, ngoko basenokungayazi indlela yokulinganisa izinqe zabo okanye isifuba okanye i-bust measurement yabo. Ukuba kunjalo, unokuthenga i-t-shirts ngokwesayizi yetshathi esekwe kubude bakho kunye nemilinganiselo yobunzima. Ukukhetha ubungakanani be-t-shirt ngokobude kunye nobunzima kulula ukwenza kuba amantombazana kufuneka azi ubude bawo, ngaphezu koko, inokuthembeka kunye nokuchaneka kwe-90%.
Itshathi yobungakanani bedyasi yabasetyhini kumantombazana
Imilinganiselo okufuneka uyiqwalasele xa ukhetha ibhatyi yabasetyhini ibandakanya ubude bebhatyi (kunye neengubo ezinde, iingubo), ububanzi bamahlombe, ubude bemikhono kunye nesinqe, kunye ne-bust.
Iibhatyi zesikhumba okanye ezizivayo zihlala zineengalo ezikufutshane nomzimba, ngoko ke ngezi ntlobo zimbini zeehempe, kufuneka uhlawule ngakumbi umlinganiselo we-biceps, xa uphakamisa iingalo zakho, kufuneka kubekho induduzo ethile. Nanga amanqaku abalulekileyo ekukhetheni ubungakanani behempe yabasetyhini.
3. Itshathi yobungakanani kunye nendlela yokukhetha ibhulukhwe yabasetyhini
Kuyabonakala ukuba ubukhulu bempahla yabasetyhini buhlala buhlulwe ngobukhulu be-S, M, L, XL, XXL, … ngokwemigangatho eqhelekileyo, kodwa kusekho ukungafani phakathi kweentlobo zeebhulukhwe ezinxiba abafazi. Ezinye iindawo ziya kuchwetheza ngokwemigaqo yoonobumba okanye amanani. Ngokomzekelo, ubukhulu beebhulukhwe ze-34 bufana nobukhulu bempahla yamadoda. Okulandelayo yitshathi yesayizi eneenkcukacha yeebhulukhwe zabasetyhini:
Okokuqala, i jeans
Indlela yokukhetha ubungakanani bee jeans zabasetyhini buya kumiselwa ngolu hlobo lulandelayo:
+ Kufuneka uqikelele imilinganiselo yesinqe sakho nethanga (elona likhulu), emva koko ulinganise umgama ukusuka kwibhanti ukuya eqatheni. Ngenxa yokuba ukulinganisa ukusuka kwibhanti ukuya kwi-ankle kunzima, ukuba uyayenza ngokwakho, akuyi kuchaneka, ngoko cela umhlobo okanye othandekayo uncedo.
+ Emva koko ulinganisa ukusuka ezantsi ukuya esinqeni, le ndawo ufanele uyinxibe kuphela impahla yangaphantsi xa ulinganisa, ukuze ilinganise ngokuchanekileyo.
+ Ukulinganisa u-3, ubungakanani bempundu buya kubalwa phakathi kwesinqe nomphezulu wethanga, ulinganisa eyona ndawo iphakamileyo yempundu.
+ Misa ibhulukhwe ukuze uqiniseke ukuba iya kukhululeka kwaye imilenze ayiqinile kakhulu. Ukuba ixinene kakhulu, kuya kwenza kube nzima kuwe ukushukuma nokushukuma.
+ Iijini eziqhelekileyo emva kwexesha ziya kubonisa iimpawu zokolula ngexesha lokusetyenziswa. Oku kunempembelelo ebaluleke kakhulu xa usenza isigqibo malunga nokukhetha ubukhulu be-jeans, kuba ukuba uthenge i-jeans ekhululekile, uya kukwazi ukugqoka amaxesha angama-1-2 kwaye uyinakekele, oku kuthetha ukuba. a Iijini ozizamayo ziqinile kancinci, kodwa ixesha ozisebenzisayo liya kuba lide.
Ukukhethwa kweebhulukhwe zekhaki kumantombazana
Ibhulukhwe yeKhaki yinto eyintandokazi yamantombazana eofisi. Isitayile siyafana nebhulukhwe yekhaki, kodwa kukho umahluko kwizinto eziphathekayo. Izinto zeKhaki aziyi kuphelelwa kwaye zolule ngokukhawuleza njenge jeans, ngaphandle kweebhulukhwe zekhaki zithungwe kububanzi obuthile. Ngoko ke, indlela yokukhetha ubungakanani beebhulukhwe ayiyikukhetha ibhulukhwe eqinile, kodwa ukukhetha ibhulukhwe ehambelanayo kwaye ikhululekile kuwe. Okwangoku, ibhulukhwe ye-baggy kunye noyilo lomzimba omncinci kushushu kakhulu, ukuba ujonge ukuthenga ibhulukhwe yekhaki, zama ukubhekisa kwezo modeli.
Ubungakanani bebhulukhwe yekhaki yabasetyhini:
Itshathi yesayizi echanekileyo yempahla yangaphantsi yabasetyhini
Impahla yangaphantsi yabasetyhini okanye ibhulukhwe yaselwandle, i-swimwear yabasetyhini yoyilo kunye nobukhulu obufanayo. Khetha iimpahla zaselwandle kunye nempahla yangaphantsi yabasetyhini ene-elasticity entle, eya kukunika ukuziva ukhululekile xa usebenzisa.
4. Itshathi yesayizi yokugqoka kunye nendlela yokukhetha ilokhwe efanelekileyo ukuze ilingane
Itshathi yobungakanani bokunxiba kumantombazana
Iziketi ezithe tye kulula ukukhetha kunye nobunye ubungakanani kuba ngokusisiseko sibanzi, sikhululekile, isiketi esivulekileyo esibaluleke kakhulu, ke akukho mfuneko yokuba uhlawule kakhulu kumlinganiselo wemijikelo emi-3 okanye ubungakanani bomgangatho wesiketi ngokwe umzimba wakho. Mane ubeke ingqalelo kubude kunye ne-dynamics ye-skirt ngokuhambelana nobude bakho kunye nobunzima.
Itshathi yobungakanani besambatho esiqinileyo sabasetyhini kunye nendlela yokukhetha ukulungelelanisa okufanelekileyo
Ngesitayela se-skirt esichukumisa umzimba, unokukhetha i-knee-length okanye i-knee-length skirts, kunye ne-slits ukukunceda ukuhamba ngokulula xa uhleli okanye uhamba. Kwaye ngenxa yokuba olu luyilo oluncinci, ubungakanani buya kuba buncinci kunezinye iingubo, abaqulunqi babekwazi oku, ngoko ke kufuneka bavelise ubukhulu obuninzi be-XL okanye i-XXL. Ngoko awusayi kuba nexhala malunga nokukhetha ubungakanani.
Itshathi yesayizi yelokhwe yabasetyhini:
5. Iiparamitha zokuguqulwa komgangatho wabasetyhini kufuneka zikhunjulwe
Indlela yokuguqula ubungakanani bempahla yabasetyhini ukusuka e-US, e-UK ukuya kwi-Vietnamese ubukhulu ibaluleke kakhulu kuba le ngxaki abantu abaninzi bahlala bejamelana nayo. Nangona kunjalo, kwinqaku lanamhlanje, siya kukucebisa itafile yokuguqula ubungakanani obulula bempahla yabasetyhini:
Itheyibhile yokuguqula ihempe yaseYurophu
Itheyibhile yokuguqula ubungakanani beebhulukhwe zabasetyhini, iziketi kunye neziketi
Abasetyhini abaninzi bahlala bezibuza ukuba yintoni ubungakanani besinqe sabasetyhini, okanye yintoni umlinganiselo weendlela ezintathu zomfazi osekelwe kubude bakhe. Apha ndiza kubonelela ngolwazi malunga nemilinganiselo esemgangathweni yereferensi yakhe kunye nokumisela iinjongo zakhe:
Imilinganiselo ye-3 imisesane eqhelekileyo ye-1m50 yabasetyhini ubude: 77-53-81cm
Imilinganiselo ye-3 imisesane eqhelekileyo ye-1m55 ubude bebhinqa: 79.5-55,5-83.5cm
Imilinganiselo ye-3 imisesane eqhelekileyo ye-1m57 ubude bebhinqa: 81-57-85cm
Imilinganiselo ye-3 imisesane eqhelekileyo ye-1m58 ubude bebhinqa: 81.5-57.5-85.5cm
Umlinganiselo oqhelekileyo wee-3 ezijikelezayo ze-1m60 ubude bebhinqa: 82 -58 -86
Umlinganiselo oqhelekileyo we-3 imijikelezo ye-1m62 ubude bebhinqa: 83-59-87cm
Umlinganiselo oqhelekileyo we-3 imijikelezo ye-1m63 ubude bebhinqa: 83.5-59.5-87.5cm
Umlinganiselo oqhelekileyo we-3 imijikelezo ye-1m65 ubude bebhinqa: 84-60-88cm
Kwiingubo zabasetyhini kunye nee-blazers, ngaphezu kokunikela ingqalelo kwimilinganiselo emithathu, kubalulekile ukunyamekela umlinganiselo oqhelekileyo wamagxa abasetyhini.
Ngethemba, ngezi ngcebiso zingasentla kwiitafile ezichanekileyo nezichanekileyo zokulinganisa iimpahla zabasetyhini, uya kuba namava akho kwaye indlela yokukhetha ubungakanani bempahla Fit. Kwaye ungalibali ukuqeqesha umzimba wakho ukuba ube nomzimba olungelelanisiweyo kunye nokulinganisa ngokwemilinganiselo eqhelekileyo yabasetyhini.
Bona kwakhona: Oobhaka abafashisayo babasetyhini abaneemodeli ezintsha ezingaphezu kwama-500 ezihlaziywa rhoqo eMomoshop
ISINIKEZO SAMALUNGU: Momoshop.com.vn kunye nomgaqo-nkqubo “Iwaranti yemveliso yokuphila” kunye ne-10% OFF ngonaphakade kubathengi abathenga imveliso yesibini eMomoshop. I-Momoshop iyaziqhenya ngokuba “yi-Backpack, i-Bag kunye ne-Accessories System” evela kwiimpawu eziphezulu ezifana ne-Bange, i-Mark Ryden, i-Arctic Hunter, i-Kings, i-Simplecarry, i-Mikkor. Gcina i-Momoshop kwi-131/39 ukuya e-Hien Thanh Ward 13 kwiSithili 10 HCMC – I-Hotline: 0903381040 Uthethwano lweZalo
READ 15 Thương Hiệu Quần Jean Việt Nam Nổi Tiếng, Đẹp, Xịn | Kotexpro
Previous: Phan Thiết sẽ có thêm chợ đêm phục vụ du lịch | Kotexpro
Next: “MẸO HAY” Cách Chọn Size Quần Áo Nữ + Bảng kích thước váy | Kotexpro